Farmaajo Oo Isku Dayay Inuu Dilo Xasan Sheekh Iyo Sheekh Shariif – Great Banaadir
Daahir Maxamuud Geelle oo kamid ah Musharixiinta ayaa sheegay in wixii ka dhacay Hotel Maida 19-kii bishan uu ahaa isku day dil oo la rabay in lagu khaarijiyo Xasan Sheekh, Sheekh Shariif iyo Shariif Xasan.
MUQDISHO, Soomaaliya – Daahir Maxamuud Geelle ayaa ku eedeeyay Farmaajo inuu maleegay qorshe lagu dili rabay Xasan Sheekh, Sheekh Shariif iyo Shariif Xasan, kuwaasoo 19-kii bishan Ciidan Dowladda ku weerareen Hotel Maido.
“Wixii dhacay 19-ki Febuary waxay ahaayeen isku day dil oo dhamaystiran,” ayuu yiri Daahir Geelle xili uu ka hadlayay Shir Jaraa’id oo shalay Musharixiinta kuu qabteen Muqdisho.
Musharaxa ayaa xaqiijinaya warbixin ay Keydmedia Online soo qortay shalay, Macluumaadka ay Keydmedia Online ka heshay Sirdoonka Soomaaliya ayaa sheegayay in Taliye la xiray kadib markii uu diiday in la dilo Madaxweynayaashii Hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Daahir Geelle ayaa sidoo kale sheegay in rasaastii ay Ciidanka ku fureen Dibadbaxayaasha ay ahayd mid loogu talo-galay in lagu dilo Musharixiinta.
Wuxuu musharaxa xusay in ay adag tahay Farmaajo in Xukunka Wareejiyo, maadaama uu diiday in Banaanbax ay qabsadaan dadka kasoo horjeeda oo uu kahor istaagay inay isku soo bax ku qabsadaan Jimcihii Daljirka Dahsoon.
“Mudaharaad qofkaan u adkaysan karin, in isaga oo banaanbaxo mooyee, aan aqbali karin in qof kale Mudaharaado, uma adkaysan karo in qof kale la doorto,” ayuu yiri Daahir Geelle.
Daahir Geelle, oo horey usoo noqday labo jeer Wasiirka Warfaafinta iyo Safiirka Soomaaliya ee Sacuudiga ayaa tilmaamay in dal aan banaanbax ka dhici karin aysan Doorasho Xor iyo Xalaal ah ka dhici karin.
Hadalka Mucaaradka wuxuu muujinayaa in Farmaajo dalka Afgembi aan dhiig ku daadan ku qabsaday.
“Dal aan dibadbax nabad ah ka dhici karin, doorasho xor ah kama dhici karto,” ayuu hadalkiisa raaciyay Daahir Geelle.